အွန်လိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ? - Wall Street English
ဘာသာစကားတစ်ခုခု ပညာရပ်တစ်ခုခုကို အွန်လိုင်းမှာ လေ့လာသင်ယူရတာက မြန်ဆန်ပြီး အဆင်ပြေမှုရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ စုံစမ်းမယ်။ အွန်လိုင်းကနေပဲ ငွေပေးချေမယ်။ ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းဆိုသလို လေ့လာမှုကို မိမိနှစ်သက်ရာ နေရာနဲ့ အချိန်မှာ စတင်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် လေ့လာသင်ယူတဲ့နေရာမှာ ကွန်ပြူတာ၊ ဖုန်း စတာတွေနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တစ်ယောက်တည်း တကုပ်ကုပ်လုပ်နေရတာတော့ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေမှာပါ။
အပြင်မှာ သင်တန်းကျောင်းတွေ သွားတက်သလိုပဲ ဆရာတွေ၊ အခြားကျောင်းသားတွေနဲ့လည်း ထိတွေ့မှုရှိဖို့လိုသလို၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်က စာသားတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေတင်မဟုတ်ဘဲ တကယ့် live အနေနဲ့ ဆရာတွေထံကနေ ရရှိမယ့် ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ၊ အားပေးမှုတွေလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှုကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်၊ ကိုယ့်အပေါ် လက်တွေ့ရုစိုက်မှုပေးနေတယ်၊ အခက်အခဲ တစုံတရာရှိခဲ့ရင်လည်း ကူညီပေးမယ့်သူတွေ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိနေရရင်တော့ လေ့လာသင်ယူရတာ စိတ်အားတက်ဖို့ကောင်းသလို ပျော်ဖို့လည်းကောင်းလာပါတယ်။
ဒီတော့ အပြင်မှာ သင်တန်းတက်သလိုပဲ ထိရောက်မှုရှိဖို့ အွန်လိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အခါ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
စာအုပ်စာတမ်းတွေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေအပြင် အောက်ကအချက်လေးတွေလည်း လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရေး ပညာရှင်တွေက တညီတညွတ်ထဲ အကြံပြုထားကြပါတယ်။
– အင်္ဂလိပ်လို အပြန်အလှန်ပြောဆိုတာ အများအပြား ပါဝင်ရပါမယ် (နားထောင်ရပါမယ်)
– မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အင်္ဂလိပ်လို အများကြီးပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
– အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်း အင်္ဂလိပ်လို အပြန်အလှန်ပြောဆိုရတာ၊ ဆက်သွယ်ရတာတွေ အများအပြား ပါဝင်ရပါမယ်။
– ဘာသာစကား လေ့လာမှုဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေဆီကနေ သင့်ရဲ့ တတ်ကျွမ်းမှုအခြေအနေနဲ့ တိုးတက်မှုအပေါ် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှု၊ အကြံပေးမှုတွေ ပါဝင်ရမယ်။
– ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်ထားသလို အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး ကူညီတတ်တဲ့ ဆရာတွေလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
အပေါ်က အချက်တွေအားလုံးကို ပြည့်စုံအောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရင်တော့ အပြင်မှာ ကျောင်းသွားတက်ခြင်းရဲ့ အားသာချက်တွေပါ ပါဝင်သွားပြီဖြစ်လို့ အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုက အပြင်မှာ အတိုင်းပဲ ထိရောက်မှုရှိပြီး သဘာဝကျသလို တစ်ဦးထဲဖြစ်နေတဲ့ အထီးကျန်မှုတွေလည်း မရှိတော့ပါဘူး။
နှစ်ပေါင်း (၅၀) နီးပါး သက်တမ်းရှိပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၂၉) နိုင်ငံမှာ သင်တန်းကျောင်းခွဲပေါင်း (၄၅၀) ကျော်အထိ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး သင်တန်းသားပေါင်း ၃ သန်းကျော်အထိ သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့နံပါတ် (၁) အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကျောင်း Wall Street English မှာဆိုရင်တော့ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်တွေအပြင် အခြားသော အားသာချက်ပေါင်းများစွာနဲ့အတူ လူငယ် လူကြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူ စတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသူအားလုံးအတွက် ထိရောက်မှုအရှိဆုံး အွန်လိုင်းသင်ကြားမှု စနစ်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ သင်တန်းကျောင်းခွဲပေါင်း (၃) ကျောင်းနဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ သင်တန်းကျောင်းခွဲ (၁) ကျောင်း၊ စုစုပေါင်း ကျောင်းခွဲ (၄) ကျောင်းအထိ ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်သလို အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က သင်တန်းသားပေါင်းများစွာကို အောင်မြင်စွာ သင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် စင်တာမှာ သင်ယူဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Wall Street English က သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေမှာ အသေအချာပါပဲ။
ဒါကြောင့်မို့ အင်္ဂလိပ်စာကို အကောင်းဆုံး လေ့လာသင်ယူဖို့အတွက် အခုပဲ WSE Hotline: 09 977 001588 ကိုဆက်သွယ်ပြီး သင်တန်းအပ်နှံဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
(WSE International မှ Now is the Time to Learn English Online ကို ဘာသာပြန်ဆို မှီငြမ်းပါသည်။)